FBC - IS poolisii Paariis ajjeesuu isaa hime
IS poolisii Paariis ajjeesuu isaa hime
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Kaleessa magaalaa Paariisitti dhukaasa tureen poolisiin tokko yoo ajjeefamu, lamammoo madaa’aniiru.
Rakkoon kun kan uumame itti yaadamee, yeroo filannaan preezdaantummaa biyyattii gaggeeffamuuf qophiirra jirutti.
Dhukaasni Chaampis Eelyisii shororkeessitootan itti yaadamee kan raawwatame jedhan preezdaantiin biyyattii; Hoolaandeen.
Waljijjiirraa dhukaasaa poolisootaa fi shororkeessicha jidduutti taasifameen namichi kan ajjeeffame yammuu ta’u, addabaaba’iin Aark dee Triyoomf yeroo kaan tuuristootaa fi jiraattota naannichaatin guutamtee galgaleessitu, ontee eegicha cimaa jala bulteetti.
Poolisiin magaalattii mana namichaa sakatta’aa kan jiru yammuu ta’u, namichi suuta konkolaataa isaa oofaa dhufee konkolaataa poolisii qarqara karaa qabatee dhaabbataa ture cinaa dhaabbachuun poolisii rasaasan rukutee ajjeesee, kaan madeesse.
Faransaay rakkoo shororkeessummaa irra ga’aa jirurraa kan ka’e, bara Faranjootaa 2015rraa kaasee labsii yeroo ariifachiisaa keessa jirti.
Kanaan dura haaluma kanaan lubbuu lammiilee 230 dhabuun ishee ni yaadatama.
Oduuwwan Biroo « Dureewwan paartiilee mormitootaa Zimbaabuwee lama Mugaabee waliin dorgomuuf hidhata uuman	Haleellaa Taalibaanin lakkoofsi miidhamtootaa 100 caalera »